Xoogag Jihaadi ah oo weeraray saldhigyo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin Bakool iyo Jubbada Hoose.
Tuesday September 14, 2021 - 12:50:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogag jihaadi ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro culus ku miray saldhigyo ay ciidamo shisheeye ku leeyihiin gobollo dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe weeraro lagu miray laba saldhig oo ciidamada Kenya ay uga suganyihiin deegaannada Kulbiyoow iyo Cabdalla Biroole.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen hugunka rasaas culus oo labada dhinac is dhaafsanayeen, habeen hore ayay aheyd markii sidaan oo kale loo weeraray saldhigga melleteriga Kenya ee Jaziiradda Kudhaa.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in xoogag islaami ah ay xalay weeraro culus ku qaaday saldhigyada ciidamada Xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmooyinka Xudur iyo Waajid.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalyahanno aad u hubaysan ay weeraro ku ekeeyeen saldhigyadan oo kuyaal laba garoon macmal ah oo ay ku suganyihiin ciidamada Xabashida balse illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weeraradan.
Sidoo kale ciidamada wilaayada Islaamiga Sh/hoose ayaa weerar ku ekeeyay saldhig ay maleeshiyaadka dowladda ka sameysteen buundada degmada Janaale.
Weeraradan ayaa qeyb ka ah halganka lagu jiro ciidamada shisheeye ee ka socda inta badan gobollada dalka Soomaaliya ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha.
Ciidamada Yahuudda oo dib uqabtay dhammaan maxaabiistii ka baxsaday xabsiga Jalbuuc.
Weerar Khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada Puntland oo ka dhacay duleedka Boosaaso.
Mid kamida saldhigyada ciidamada AMISOM ee Sh/dhexe oo weerar cusub lakulmay.
Sarkaal Indha u ahaa ciidamada Xabashida oo lagu dilay magaalada Baydhabo.
Weeraro jidgal ah oo loo dhigay ciidamada Uganda xilli ay ku socdaalayeen Sh/hoose.
Weeraro Askar iyo Saraakiil lagu dilay oo ka dhacay deegaanno katirsan Gedo iyo Sh/hoose.
Askari lagu dilay duleedka Dayniile iyo saldhigga ciidanka Burundi ee Ceelbaraf oo laweeraray.
Weerar Madaafiic ah oo lagu weeraray xarumo kuyaal degmada Jowhar.
Ciidamada Kenya oo lagu weeraray Jaziiradda Kudhaa iyo Warar kale.